Barayaal ka socda FIFA oo siminaar u furay garsoorayaal Soomaaliyeed + Sawirro – Gool FM
jilacow July 9, 2016
(Muqdisho) 09 Luuliyo 2016 –Hotelka Saxafi ee Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay Siminaar heerkiisu sareeyo kaasoo sare loogu qaadayo tayada garsoorayaasha Soomaaliyeed.
Siminaarkaan ayaa waxaa bixinaya barayaal ka socodo FIFA oo kala ah MR Felix oo ka yimid Zimbabwi iyo Maxamed Xuseen oo Jabuuti ka socda.
Waxaa goobta laga jeediyay qudbado kala duwan oo lagu dhiiro gelinayao garosoorayaasha da’da yar ee loo qabtay Siminaarka.
Waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xiriirka kubada cagta soomaaliya C/qani saciid carab isagoo u mahad celiyay barayaasha FIFA ee bixinaya aqoon kororsiga, waxaana dhanka kale ugu baaqay garsoorayaasha in ay ka faa ideystaan aqoon kororsiga loo qabtay.
Geesta kale MR Felix ayaa dhankiisa sheegay in uu arko garsoorayaal da’yar oo waliba waqti u heysta in ay meel wacan ka gaaraan mustaqbalkooda, waxa uuna Sooomaaliya ku aamanay tayada ay gaarsiisan tahay heerka garsoorka.
Ugu dambeyn Wasiirka wasaarada dhalinyarda iyo Sporiga Maxamed C/laahi Nuux ayaa ku amaanay xiriirka kubadda cagta in dalkooda ay ku qabsadaan siminaaradii dibadda ay u aadi jireen, waxa uuna si toos ah u furay Siminaarka kaasoo socon doono ilaa 13-bishaan.
Sikastaba Waa markii sadexaad oo Siminaar nuucaan ah lagu qabto Soomaaliya, waxaana ka qeyb qaadaneysa 30 garsoore oo isugu jiro heer caalami, heerka koowaad,labaad iyo Saddexaad.
Guardiola oo aan kalsooni ku qabin Hart....Yuu bidhaansaday?